NYOCHA IGWEFOTO IP NA-ENWEGHỊ NCHỊKỌTA - MMEMME NYOCHA - 2019
Onye Nyocha Igwefoto IP 4.03
Ozi dịka ụbọchị amụrụ na netwọk mmekọrịta bụ VKontakte bụ nke kachasị mkpa, ya mere mgbanwe ya anaghị eme ka nsogbu dịrị. Ntuziaka dị n'okpuru ga-enyere gị aka na edezi.
Ụzọ kachasị mfe iji gbanwee ụbọchị ọmụmụ na profaịlụ dị na njirimara zuru ezu nke saịtị VKontakte, dị ka akụnụba na-enye ndụmọdụ dị iche iche. Ọ dị mkpa ịghọta na ọ bụ naanị ịgbanwe ma ọ bụ zoo ụbọchị ka a na-ahapụ, mana ọ bụghị ihichapụ ya kpamkpam.
Gaa na ngalaba "My Page" ma n'okpuru foto profaịlụ kachasị eji bọtịnụ ahụ "Dezie". N'otu ebe ahụ nwere ike ịnweta site na menu na akụkụ aka nri n'elu ebe.
Ịnọ na taabụ "Ntọala"chọta akara "Ụbọchị ọmụmụ".
Mgbe ịmechara ụkpụrụ ndị a chọrọ, echefula ịhọrọ ntọala nzuzo maka ụbọchị ahụ.
Ị nwere ike itinye parameters ọhụrụ site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Chekwa".
Ugbu a ụbọchị na ụdị nke ngosi ya na ibe ahụ ga-agbanwe dị ka ntọala gị.
Anyị nwere olileanya na ị gaghị enwe nsogbu na mmejuputa usoro a kọwara.
Ngwa ngwa ngwa VKontakte na-enye otu ndepụta nke ntọala profaịlụ dịka nsụgharị zuru ezu. N'ihi ya, na saịtị a, ị nwere ike ịgbanwe ụbọchị ọmụmụ.
Mepee menu nke ngwa ma gaa na isi nke profaịlụ onwe gi.
N'okpuru okpu nwere foto, chọta ma jiri bọtịnụ ahụ "Dezie".
N'okpuru ederede, chọta ngọngọ ahụ "Ụbọchị ọmụmụ"wee pịa akara na nọmba.
Iji kalịnda emepee, setị uru achọrọ ma pịa bọtịnụ ahụ "Emere".
Ụdị ngosi ụbọchị na-arụ ọrụ dị mkpa.
Mgbe ịmechara ntọala, pịa akara ngosi ahụ na akara akara na nkuku ihuenyo ahụ.
Ugbu a, ị ga-enweta ọkwa nke nzizi nke ọma, ụbọchị ahụ ga-agbanwe.
Na nke a, ụzọ nke ịgbanwe ụbọchị ọmụmụ nke VKontakte ọgwụgwụ.